सात दिनमा नै संक्रमितहरु निको भएर घर फर्कन थालेपछि आयुर्वेद उपचारमा आकर्षण बढ्दै (भिडियो) – NepalajaMedia
सात दिनमा नै संक्रमितहरु निको भएर घर फर्कन थालेपछि आयुर्वेद उपचारमा आकर्षण बढ्दै (भिडियो)
August 16, 2020 171
काठमाडौं, ३२ साउन । पूर्वीय उपचार पद्धतिमा प्राचीन समयदेखि विश्वास जग राख्दै आएको आयुर्वेदले फेरि एकपटक सबैको मन जित्ने अवस्था देखिएको छ । कोरोना भाइरसको उपचारका लागि नेपालमा आयुर्वेदिक पद्धतिले छोटो समयमै सङ्क्रमित बिरामी निको हुन थालेपछि यसप्रतिको विश्वास र आकर्षण पुनः चुलिने देखिएको छ ।
कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा भर्ना भएका कोरोनाका बिरामी अन्य अस्पतालको तुलनामा छिटो निको भएर घर फर्किन थालेका छन् । अस्पतालका चिकित्सकले अधिकांश बिरामीको ७ दिन मै पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएर डिस्चार्ज हुन थालेको जानकारी दिएका छन् ।
हालसम्म कोरोना संक्रमणको औषधि उपचार पत्ता लागेको छैन । यस्तोमा संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचार पनि अस्पताल र चिकित्सक अनुसार फरक फरक तवरबाट भैरहेको छ ।
सरकारको कोरोना संक्रमित राख्न छुट्याएको अस्पताल मध्य कीर्तिपुर आयुर्बेद अस्पताल पनि एक हो । सबै भन्दा बढी आइसोलेसल बेड भएको यो अस्पतालमा हाल उपत्यकामा देखिएका संक्रमितलाई राख्ने गरिएको छ ।
यहाँ भर्ना भएका कोरोना संक्रमितलाई आयुर्बेद पद्दतिबाट पनि उपचार गरिन्छ । आयुर्बेद पद्दतिको उपचारले संक्रमितहरु छिटो निको हुने गरेका पनि छन् । अन्य अस्पताल प्राय १४ दिनमा पीसीआर नेगेटिभ आउनेमा यहाँ ७ दिन मै पीसीआर नेगेटिभ आएर बिरामी डिस्चार्ज हुने गरेका छन् ।
कीर्तिपुरमा आयुर्बेद अस्पातलमा संक्रमितलाई उपचार गर्ने विधिको बारेमा चिकित्सक डा निर्मल भुषाल यसरी प्रष्ट पार्नु हुन्छ । आयुर्बेद अस्पतालमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि ,सन्तुलित आहार ,श्वासप्रश्वास सजिलो बनाउने बिधि ,बिभिन जडीबुटीबाट तयार पारिएको आयुर्वेदिक औषधिहरु संक्रमितलाई दिने गरिएको छ । संक्रमितलाई २४ सै घण्टा तातोपानीको व्यवस्था छ ।
चारैतिर हरियाली वातावरणमा संक्रमितहरु बरण्डामा निस्किएर वातावरण नियालिरहेको देखिन्छन् । आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रतिको विस्वास र बिरामीको उच्च आत्मबलका कारण पनि संक्रमित छिटो निको भएका छन् ।
आइतबार न्युज २४ को टिम कीर्तिपुर अस्पताल पुग्दा अस्पतालमा १ सय ३० जना संक्रमित भर्ना थिए । ति मध्ये केही निको भएर घर जाने तरखरमा थिए भने केही पीसीआर परीक्षण गराइरहेका थिए । आइतबार सम्म ४० जना बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् । अधिकास ७ दिन मै निको भएर घर फर्किने गरेका छन् ।
Prevपोर्चुगल का’ण्डको बास्तबिकता… आखिर कहाँ गए आमा छोरा ? प्रत्यक्षदर्शीलाई खोजि खोजि मिडियामा ल्याएपछि(भिडियो)
Nextकाठमाडौँको एक निजि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई १२ दिन राखेको बिल आयो २६ लाख तर बाचेन बिरामी, पैसा दिएपछि मात्रै सेनाले शव लैजान पायो
म्याग्दी : सलहले खाएर मकै तथा धानबाली नष्ट
अमेरिका पढ्न गएका प्रमोद, सुतेकै ठाउँमा अस्ताए…
देशभर एकै दिन ४ सय ९९ संक्रमित निको भए, कुल १६ हजार ३ सय १३ जना घर फर्किए
चितवनबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बोलेरोले मोटरसाइकललाई ठ’क्कर दिँदा पानी पानी भन्दै घट’नास्थ’लमै ज्या’न गुमा’ए
शनिबार बिहानै आयो खुसिको खबर:सोच्नै नसकिने गरि घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य! (4343)